ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - Software နှင့် Support Services | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
« ဝယ်ယူရေးအသိပေးချက်: Kars ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာ 2250 Ton 60E1 ရထားဝယ်ယူရေး
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လုပ်ငန်းခွင်သမားန်ဆောင်မှုများလက်ခံရရှိလိမ့်မည် »
Bakımစနစ်နှင့်ကွန်ယက်ထုတ်ကုန်များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်လည်ပတ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပြည်သူ့ဝယ်ယူရေးဥပဒေပုဒ်မ 4734 အရပွင့်လင်းသောတင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားဖြင့်ဝယ်ယူရမည်။ တင်ဒါနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဂ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3123090515 / 4771 - 3123115305
က) အမည် - Bakımစနစ်နှင့်ကွန်ရက်ထုတ်ကုန်များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်လည်ပတ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ
1 ယူနစ်letşletစနစ်နှင့်ကွန်ရက်ထုတ်ကုန်များအတွက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်လည်ပတ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ
(ဂ) နေရာ / ပေးအပ်မှု - •ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်လည်ပတ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု - TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှု၊ ဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစင်တာ၊ ဒေသဆိုင်ရာဌာနချုပ်စင်တာများ၊ Izmir ဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု ဦး စီးဌာန၊ YHT လမ်းကြောင်းရှိဘူတာအားလုံး
ဃ) အလုပ်နေ့စွဲ စတင်. :2စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးသည့် နေ့မှစ. ရက်အတွင်းအလုပ်စတင်ပါလိမ့်မယ်။
က) ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး (နောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းမှု) ရက်စွဲနှင့်အချိန်: 11.11.2019 - 10: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Software များနှင့်ပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှုများလက်ခံရရှိလိမ့်မည် 27 / 09 / 2016 ဆော့ဝဲလ်နှင့်အထောက်အပံ့ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရရှိမည် TC STATE RAILWAYS အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှု၊ အထွေထွေညွှန်ကြားမှု KKY စနစ်၏ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အထောက်အပံ့နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ virtualization နှင့် EYBIS စီမံကိန်းစနစ်များကိုဝယ်ယူထားပါသည်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: İzmir Metro Inc မှ .. ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှုများလက်ခံရရှိလိမ့်မည် 16 / 03 / 2017 mirzmir Metro Inc. ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်ထောက်ပံ့ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရရှိလိမ့်မည်။ İZMİR METRO İZMİRခŞEHİR BEL.METRO İŞL.TAŞ.İNŞ.SAN။ ve TİC။ Inc က mirzmir Metro AŞ၏ဟာ့ဒ်ဝဲ၊ ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ကွန်ယက်ပါဝင်သောအိုင်တီအခြေခံအဆောက်အအုံ…
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Software များနှင့်ပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှုများလက်ခံရရှိလိမ့်မည် 12 / 12 / 2017 SOFTWARE နှင့် Support Service ကိုတူရကီနိုင်ငံ၏ရထားလမ်း၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှု၊3နှစ်အတွက် Microsoft Enterprise License Agreement နှင့် Microsoft Premier Support နှစ်ပတ်လည်သက်တမ်းကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Software များနှင့်ပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှုများလက်ခံရရှိလိမ့်မည် 18 / 01 / 2018 Software and Support Services ကို TC STATE RAILWAYS General DIRECTORATE (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှုရယူပါလိမ့်မည်။ အထွေထွေညွှန်ကြားမှုသတင်းအချက်အလက်စနစ်များအသုံးပြုသောဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆိုင်သောစက်ပစ္စည်းများ၏7/ 24 ၏စက်ပစ္စည်းများကိုအသစ်ပြုပြင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်း
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Software များနှင့်ပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှုများလက်ခံရရှိလိမ့်မည် 16 / 04 / 2018 Software and Support Service ကိုရထားလမ်း၏ TC အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန (TCDD) YHT ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု Ankara-Konya YHT လိုင်းကိုယ်တိုင်မော်တာယာဉ်မောင်းနှင့် Scada အပါအ ၀ င်ဆော့ဖ်ဝဲကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းပါ ၀ င်သည်။
TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှု, ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှုများလက်ခံရရှိလိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: İzmir Metro Inc မှ .. ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှုများလက်ခံရရှိလိမ့်မည်
3D ပရင်တာအတွက်သိပ္ပံ, စက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနမှပံ့ပိုးမှုလက်ခံရရှိခဲ့သည်